Umncedisi kaGoogle ngoku uchonga iingoma njengo Shazam | Iindaba zeGajethi
I-Shazam yayiyinkqubo yokuchonga umculo ngokupheleleyoUngandibuzi ukuba uyenza njani ngoku okanye wayenza njani ngaphambili, kodwa imizuzwana embalwa yengoma yanele ukuyichonga kwaye isinike lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze sikwazi ukuyimamela nanini na naphina apho sifuna khona . Inyani yile yokuba yayiyinto enomdla ngexesha layo kwaye uninzi lwethu luyaqhubeka ukuyisebenzisa namhlanje.
Ezi ndidi zamakhono zenza ingqiqo enkulu kubancedisi abanjengoSiri. Ngoku uMncedisi kaGoogle uqinisekisile ukuba uya kuba nakho ukuchonga ngokukhawuleza iingoma ngokumamela nje. Elinye inyathelo likaGoogle lokuphucula ngokubonakalayo umncedisi walo okhoyo kwiifowuni eziphathwayo ezingakumbi kwihlabathi liphela.
Kude kube ngoku yayiyinto ekhethekileyo yeGoogle Pixel 2 kunye nePixel 2 XL, Kodwa ngoku ikhona kuzo zonke izixhobo ezixhasa umncedisi kaGoogle. Ukusukela ngoku ukuya phambili kuya kusivumela ukuba sichonge nayiphi na ingoma edlalayo kwaye umbhobho uyakwazi ukuyichonga, kuba oku kuyakufuneka sibuze umncedisi kuphela. Yeyiphi ingoma edlalayo? kwaye iya kusinika ulwazi oluyimfuneko, ngenxa yoku siya kufumana uhlobo lwekhadi lolwazi elinegama lengoma, amakhonkco kwiYouTube nakwigcisa.
Ngoku kuza iindaba ezimbi, kuba ngoku ukusebenza kuthintelwe eMelika yaseMelika, asazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukwandisa ukuya kwezinye iindawo apho uGoogle kunye ne-Android basebenza ngokubanzi, sicinga ukuthunyelwa koku ukusebenza okutsha kuya kuba ngokufanayo kwaye ngokuthe ngcembe, ke ungalahli ithemba (kulula ukulilahla ngokujonga umgaqo-nkqubo wokuhlaziya we-Android) kwaye ulinike iintsuku ezimbalwa, kungekudala uza kuba nakho ukuwuchonga wonke umculo owufunayo ngoMncedisi kaGoogle kunye nefowuni yakho ye-Android… ingaba iya kuba sisiphelo sikaShazam? Siza kukwazisa nge-Twitter xa umsebenzi usebenza, ngelixa ungandwendwela i-AndroidSIS.com ukuze ufunde okungakumbi ngesihloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Umncedisi kaGoogle ngoku uchonga iingoma njengoShazam
IFixit yenza ukusikwa kwe-iPhone X entsha kwaye oku kuyothusa nangaphakathi